Black Silicon Carbide - Shiinaha Shanghai Bosun sugi lahaayeen
Silicon carbide waxaa laga sameeyey ciid quartz, coke petroleum (ama char), sida balka ka arc korontada dikhaw foornada. In dabiiciga ah waxaa kale oo jira Silicon dhif moissanite macdanta carbide. carbide Silicon, sidoo kale loo yaqaan Moissanite. In casriga C, N, B iyo non-xabagta qalabka kale ee madax adkaadeen in farsmada heerka sare ah, carbide Silicon waa mid ka mid ah ugu ballaaran loo isticmaalo, iyo ugu dhaqaalo badan. oo la odhan karaa Emery ama ciid madax adkaadeen. Silicon carbide waa ciid quartz, coke petroleum (ama daamur dhuxusha), qoryo (carbide Silicon cagaaran u baahan tahay in la kordhiyo wax soo saarka ee cusbo) iyo qalabka kale ee cayriin ee heerkulka sare dikhaw foornada iska caabin ah. At-soo-saarka la joogo Shiinaha ee warshadaha ee carbide Silicon waxaa loo qaybiyaa laba nooc oo carbide Silicon madow iyo carbide Silicon cagaaran, waa kiristaalo hexagonal, xisaabiyenimo 3,20 in 3.25, microhardness 2840 ~ 3320kg / mm2
Size goobtii: 12 # -220 #;
Qoyaanka 1.0% max.
1. sida hadal haynta ah, waxaa loo isticmaali karaa abrasives, sida wheel sii darane, Whetstone, shiidi doona, xabbad leben ciid iyo wixii la mid ah.
2. deoxidizer iyo heerkulka sare qalabka sida qodniinka-.
3. khayroon daahirnimo sare crystal hal loo isticmaali karaa soo saaridda of saarka Semiconductor fiiloyin carbide Silicon.
4. modifiers waxaa loo isticmaali karaa sida deoxidizer iyo birta ah oo qaab-dhismeedka birta ku tuuray, loo isticmaalo sida qalabka laga bilaabo samaynta tetrachloride Silicon, waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee cayriin ee warshadaha cusbi silicone.
5. qalabka High-kulka kulaylinta dadban
Isticmaalka qaraxa Large dahaarka foorno
qalabka 4.metallurgical cayriin,
Black Silicon Carbide Waayo, Sale
Price Silicon Carbide ee